Mogadishu Journal » Somaliland oo qaaday tallaabo ka dhan ah Shirkadaha keena Shidaalka
Somaliland oo qaaday tallaabo ka dhan ah Shirkadaha keena Shidaalka
Mjournal :-Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in laga bilaabo kowda bisha October ee soo socota ay iyadu dalka keeni doonto shidaalka, isla markaana ay shirkadaha shidaalka hadda keenaa ay iyada ka sii iibsadaan.
Soomaaliland ayaa sheegtay in laga bilaabo Kowda Bisha Octoober e soo socota ay deegaanadeeda keeni doonto Shidaalka laga keeno dalka dibadiisa, isla markaana shirkadaha shidaalka keena laga doonayo inay Xukuumadda Soomaaliland ka iibsadaan.
Qoraal uu Maanta oo saaray Maareeyaha Haamaha Keydka Shidaalka Berbera ayaa lagu ogeysiiyay ganacsatada shidaalka in ay arrintaasi la socdaan, ciddii diidana aan la siin doonin mar dambe wax shidaal ah.
Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Shirkadaha keena shidaalka laga doonayo inay jawaab deg deg deg ah kasoo bixiyaan Qoraalka Maareeyaha Haamaha Keydka Shidaalka Berbera si uu u dhaco heshiis dhexmara Xukuumadda iyo Shirkadaha keena Shidaalka.
Inter Milan oo qorsheysay saxiixa Christian Eriksen
Wafdi heer sare ah kana socda QM iyo Bankiga Adduunka oo kusoo wajahan Muqdisho